Ode ukuya kwiOchard • ibhafu yangaphandle, iimbono ezimangalisayo
Indlu epholileyo, ekhuselweyo ene-rustic vibe, i-Ode ukuya kwi-Orchard ijikelezwe zezona ndawo zintle zewayini zase-Adelaide Hills kwaye ihlala phezulu kwiihektare ezili-16. Yenye yamakhaya amatye okuqala ale ndawo kwaye iyonwabela iimbono ezimangalisayo ezingama-360 zeLenswood entle. Akukho ndawo ingcono yokuphumla: cwilisa kwindawo yokuhlambela yonyawo oluhle ujonge ezinkwenkwezini, yonwabele iglasi ebomvu yalapha emlilweni, okanye uzame iresiphi yethu yokudilika kweapile kwi-aga eyenziwe ngamaplanga.
Silandele ku-Instagram: @ode_totheorchard
I-Ode to the Orchard ikwinduli ejonge kumabhoma ee-apile, iidiliya, amadlelo kunye nehlathi.
Amagumbi amabini okulala athokomeleyo aneebhedi zendlovukazi, igumbi lokuhlambela elineshawa phezu kwebhafu, igumbi lokuphumla elinomlilo weenkuni (iinkuni kunye nezibane zomlilo zibonelelwe), iilounge ezi-2 zesikhumba kunye nesitulo sengalo, ikhitshi eligcweleyo elinesitovu sombane kunye nomatshini wekofu (iipod ezibonelelweyo) kunye ne-oveni ye-Aga efakwe ngamaplanga.
Igumbi lokutyela elahlukileyo linezihlalo ezi-6. Igumbi lokuhlamba impahla linewasha kunye nesomisi (kubonelelwe ngomgubo wokuhlamba), iayini kunye nebhodi yoku-ayina.
Igadi yeziqhamo kukuhamba okufutshane ukusuka endlwini kwaye konke okwakho ukuba uphonononge. Uza kuqhuba udlula kuyo xa usendleleni. Kukho iiveranda ezingaphambili nangasemva ukonwabela ukuphuma nokutshona kwelanga kwindawo entle yaseAdelaide Hills. Sinendawo yokuhlambela elunyaweni oluthandekayo lwangaphandle (phantsi kwekhava) ejonge kwimboniselo apho unokonwabela isibhakabhaka esiluhlaza emini okanye iinkwenkwezi ebusuku - ngumlingo ngokwenene!
Ukupheka kwi-aga eyenziwe ngamaplanga eediliya ngamava amahle kwaye ayingqayizivele yelizwe kwaye sincoma kakhulu - igcina indlu ithoyilethi ngakumbi! Sineresiphi yethu kunye nezithako ze-apile ezidilikayo ezikulindileyo (imiyalelo ye-Aga inikezelwe kwincwadi yoKwamkeleka) - konke okufuneka ukwenze kukuzisa i-ice cream!
Indlu igcinwa ipholile kakhulu ebusika kwaye ipholile ehlotyeni ngokufudumeza / ukupholisa. Kananjalo oku, amagumbi okulala aneengubo zombane kwaye igumbi lokuphumla linomlilo wamaplanga omangalisayo.
Kulabo bahamba neentsana kukho indawo yokuba i-portacot yakho ibekwe kwelinye lamagumbi okulala okanye kwigumbi lokudlela (ecaleni kwamagumbi okulala) kwaye sinokunika isitulo esiphezulu ngesaziso sangaphambili. Nceda uqaphele ukuba akukho sikrini phambi komlilo otshayo ke kuya kufuneka ukuba ukhathalele nabantwana abancinci. Idesika inokujongeka njengokuhla okukhulu kwiifoto kodwa kuku-60cm kuphela ngaphezulu kwegadi kwindawo ephezulu.
4.93 ·Izimvo eziyi-286
4.93 · Izimvo eziyi-286
IOde ukuya kwiOrchard yonwabela iimbono ezintle zeLenswood kunye neAdelaide Hills, iiwineri ezikufutshane ziquka iPike & Joyce, iMt Lofty Ranges Vineyard, Golding Wines, Anderson Hill, Cobb's Estate, Tilbrook Estate, The Lane Vineyard, CRFT Wines kunye Nentaka Esandleni. Idolophu yaseJamani eHahndorf ikwimizuzu eli-15, ilungile ekuzuleni nasekuthengeni iifestile. Abancinci banokuyonwabela iCleland Wildlife Park eCrafers (imizuzu engama-20). IStanley Bridge Tavern kunye neCrafers Hotel zii-pubs ezintle zesidlo. Ilahlekile kwiHlathi e-Uraidla (imizuzu eyi-10 kude) ineepizza ezilungileyo kakhulu kwiinduli kunye nendawo epholileyo kwicawa endala. UEmma & Ivy eLobethal yindawo entle yokutyela ikofu. Zininzi iingoma ezimangalisayo zokuhamba, iMt Lofty Summit ihamba ngeyona ndawo yaziwayo kunye nezona mbono zibalaseleyo ukusuka phezulu!
Ndifuna ukukwenzela oku ukuhlala okumangalisayo ukuze ndihlale ndifumaneka nge-imeyile okanye ngetekisi yayo nayiphi na imibuzo ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ndiya kuphendula ngokukhawuleza.